စက်သုံးဆီတင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းကနေ သိုလှောင်ထားတဲ့ ဓါတ်ဆီတွေကို ဆီပန့်လိုင်စင်ရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုပဲ ခွဲတမ်းချ ရောင်းချပေးတော့တာကြောင့် သာမန် လက်လီဆီဆိုင်အများအပြား ပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန် ပေးပို့တဲ့သတင်းကို ကိုငြိမ်းချမ်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီတင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းကရောင်းချပေးတဲ့ဓာတ်ဆီကို ခွဲတမ်းရတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ဓာတ်ဆီကို လိုသလောက်ရပေမယ့် ခွဲတမ်းမရတဲ့ လက်လီဆိုင်အများအပြားကတော့ ဆီပြတ်ပြီး အရောင်းပိတ်ထားရပါတယ်။ ရန်ကုန်က ဆိုင်အများစုမှာ ဓာတ်ဆီဝယ်မရတော့ဘူးလို့ ရန်ကုန်မြို့တွင်း အငှားယာဉ်မောင်းများအသင်းက ကိုပါကြီးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
"မြို့ထဲကဆိုင်တွေ တော်တော်များများကတော့ 92/95 ဆိုရင် မရှိဘူးပြောတယ်။ ဝင်သွားတာနဲ့ မရပါဘူးခင်ဗျာ အဲလိုပြောတာ။ ကျန်တဲ့ရိုးရိုး ဒီဇယ်ရမယ်၊ ပရီမီယံရမယ်၊ အဲလိုပြောတယ်၊ ကျနော်တို့သွားထည့်တာ ကျနော်တို့နဲ့ ကြုံတဲ့ဆိုင်တွေပေါ့နော်။"
မန္တလေးတိုင်းမှာလည်း ခွဲတမ်းအလုံအလောက်ရတဲ့ ဆိုင်ကြီးတွေမှာပဲ ဓာတ်ဆီရပြီး ဆိုင်အများစုက ပိတ်ထားရတယ်လို့ မန္တလေးတိုင်း စက်သုံးဆီလက်လီ ရောင်းချသူများအသင်းက ဦးကျော်စွာမြင့်က ပြောပါတယ်။ လက်လီဆိုင်တွေဟာ စက် သုံးတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေဆီကနေ ခွဲတမ်းမရတော့လို့ ပြင်ပမှာဝယ်မယ်ဆိုရင် အဆမတန်ပေးဝယ်ရသလို လိုသလောက်ရဖို့လည်း မသေချာဘူးလို့ သူကပြောပါတယ်။
"မန္တလေးမှာလည်း ဆိုင်ကြီးတွေလောက်ပဲရတာ၊ BOC တို့ Denko တို့လောက်ပဲ၊ Asia Energy တို့ ရွှေဗျိုင်းဖြူတို့။ တချို့ဆိုင် တော်တော်များများက ဆီပြတ်တယ်။ ပုဂ္ဂလိကက ကြားနာမည်နဲ့ ဆိုင်တွေတောင် ဆီပြတ်သေးတာလေ။ ဆီဈေးကတလုံး (တပီပါ) ကို ၅၇၀,၀၀၀၊ ၅၈၀,၀၀၀ အထိ ပေးဝယ်နေရတာပေါ့။ အဲဒါ အောက် တိန်းတို့ 92 တို့ပေါ့။ တကယ်လိုအပ်တဲ့သူဆို ၆၀၀,၀၀၀ လောက်အထိ ပေးဝယ်ရတယ်။ အဲဒါအများကြီးမရဘူးလေ ဂါလံ ၅,၀၀၀၊ ၆,၀၀၀ ယူတဲ့သူတွေတောင်မှ ၅၀၀ လောက်ပဲရတော့တာ။ အဲဒါတောင် လေးငါးရက်လောက် စောင့်နေရတာ။ ခွဲတမ်းရတဲ့ဆိုင်တွေကျ ဈေးသက်သာတယ်လေ။ လက်လီအသေးလေးတွေ တော်တော်များများဆိုရင် ပိတ်တောင်ပိတ်ထားရတယ် ပိတ်ကုန်ပြီ။"
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်က ဆီဆိုင် ၃၂၄ ဆိုင်ကို ခွဲတမ်းနဲ့ရောင်းချပေးမယ်လို့ ဆီတင်သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက မေလ၂၁. ရက်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ ၂၆ ရက်မှာတော့ ဆီဆိုင်ပေါင်း ၃၂၄ ဆိုင်မကဘဲ ဆိုင်အများအပြားကိုလည်း ခွဲတမ်းနဲ့ရောင်းပေးနေပြီလို့ ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ဆီလက်ကျန်နည်းနေတဲ့အတွက် အရောင်းခဏရပ်ထားဖို့ စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်တွေက မေလ ၁၉ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဓာတ်ဆီဈေး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလို တချို့ဒေသတွေမှာ ဓာတ်ဆီဝယ်မရလို့ အရောင်းပိတ်ခဲ့ရတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်း ဆီတင်သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတခုက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ စင်္ကာပူက ဆီတင်သင်္ဘောသုံးစီးလည်း သီလဝါဆိပ်ကမ်းကို မကြာခင်ရောက်ဖို့ရှိကြောင်း သူကပြောပါတယ်။
"ခွဲတမ်းချတာတော့ အရမ်းများတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် အဲလို SME ဆိုင်တွေလေ။ အခုလည်း ဒီတပတ်ထဲမှာလည်း အများကြီးပေးဖို့ ရှိတယ်ဗျ။ အကန့် အသတ်တွေတော့ ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ (ဆီပန့်) လိုင်စင်နံပါတ်တော့ ရှိရမှာပေါ့နော်။ အခုလက်ရှိက သုံးစီးဝင်မယ်။ ဇွန်လထဲမှာလည်း သင်္ဘောတွေဝင်လာဖို့ အများကြီးရှိတယ်။ အနည်းဆုံးတန်ချိန်ကတော့ ၆၀,၀၀၀ အထက်မှာပဲရှိတယ်။ လက်ရှိဆိုရင် discharge လုပ်နေတာ တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင် ၂စီး discharge လုပ်နေတယ်၊ နောက်ထပ် ၂စီးလည်း stand-by အနေအထားပေါ့နော် ဆက်ပြီးချဖို့ အဲလိုတော့ရှိတယ်။"
ရေနံထွက်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနကတော့ 92 တလီတာကို ၁,၈၄၄ ကျပ်၊ 95 တလီတာကို ၁,၉၄၉.၃၃ ကျပ်၊ ပရီမီယံဒီဇယ် တလီတာကို ၁,၉၆၆.၂၁ ကျပ်ဆိုပြီး ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းကို ဒီကြာသပတေးနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်လီဈေးကွက်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းထဲမှာ ဓာတ်ဆီ 92 တလီတာကို ကျပ် ၂,၇၀၀ လောက်အထိတက်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ နေရာဒေသအပေါ်မူတည်ပြီး 92 တလီတာကို ကျပ် ၂,၀၈၀ ကနေ ၂,၃၃၀ ကြားရှိပါတယ်။
စကျသုံးဆီတှေ ခှဲတမျးနဲ့ရောငျးပေးလို့ လကျလီဆိုငျအမြားအပွား ပိတျထားရ
စကျသုံးဆီတငျသှငျး ဖွနျ့ဖွူးရေးအသငျးကနေ သိုလှောငျထားတဲ့ ဓါတျဆီတှကေို ဆီပနျ့လိုငျစငျရှိတဲ့ဆိုငျတှကေိုပဲ ခှဲတမျးခြ ရောငျးခပြေးတော့တာကွောငျ့ သာမနျ လကျလီဆီဆိုငျအမြားအပွား ပိတျလိုကျရပါတယျ။ ဒီအခွအေနနေဲ့ပတျသကျလို့ ရနျကုနျ ပေးပို့တဲ့သတငျးကို ကိုငွိမျးခမျြးက တငျပွပေးထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ စကျသုံးဆီတငျသှငျး ဖွနျ့ဖွူးရေးအသငျးကရောငျးခပြေးတဲ့ဓာတျဆီကို ခှဲတမျးရတဲ့ဆိုငျတှမှော ဓာတျဆီကို လိုသလောကျရပမေယျ့ ခှဲတမျးမရတဲ့ လကျလီဆိုငျအမြားအပွားကတော့ ဆီပွတျပွီး အရောငျးပိတျထားရပါတယျ။ ရနျကုနျက ဆိုငျအမြားစုမှာ ဓာတျဆီဝယျမရတော့ဘူးလို့ ရနျကုနျမွို့တှငျး အငှားယာဉျမောငျးမြားအသငျးက ကိုပါကွီးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
"မွို့ထဲကဆိုငျတှေ တျောတျောမြားမြားကတော့ 92/95 ဆိုရငျ မရှိဘူးပွောတယျ။ ဝငျသှားတာနဲ့ မရပါဘူးခငျဗြာ အဲလိုပွောတာ။ ကနျြတဲ့ရိုးရိုး ဒီဇယျရမယျ၊ ပရီမီယံရမယျ၊ အဲလိုပွောတယျ၊ ကနြျောတို့သှားထညျ့တာ ကနြျောတို့နဲ့ ကွုံတဲ့ဆိုငျတှပေေါ့နျော။"
မန်တလေးတိုငျးမှာလညျး ခှဲတမျးအလုံအလောကျရတဲ့ ဆိုငျကွီးတှမှောပဲ ဓာတျဆီရပွီး ဆိုငျအမြားစုက ပိတျထားရတယျလို့ မန်တလေးတိုငျး စကျသုံးဆီလကျလီ ရောငျးခသြူမြားအသငျးက ဦးကြျောစှာမွငျ့က ပွောပါတယျ။ လကျလီဆိုငျတှဟော စကျ သုံးတငျသှငျးဖွနျ့ဖွူးတဲ့ လုပျငနျးကွီးတှဆေီကနေ ခှဲတမျးမရတော့လို့ ပွငျပမှာဝယျမယျဆိုရငျ အဆမတနျပေးဝယျရသလို လိုသလောကျရဖို့လညျး မသခြောဘူးလို့ သူကပွောပါတယျ။
"မန်တလေးမှာလညျး ဆိုငျကွီးတှလေောကျပဲရတာ၊ BOC တို့ Denko တို့လောကျပဲ၊ Asia Energy တို့ ရှဗြေိုငျးဖွူတို့။ တခြို့ဆိုငျ တျောတျောမြားမြားက ဆီပွတျတယျ။ ပုဂ်ဂလိကက ကွားနာမညျနဲ့ ဆိုငျတှတေောငျ ဆီပွတျသေးတာလေ။ ဆီဈေးကတလုံး (တပီပါ) ကို ၅၇၀,၀၀၀၊ ၅၈၀,၀၀၀ အထိ ပေးဝယျနရေတာပေါ့။ အဲဒါ အောကျ တိနျးတို့ 92 တို့ပေါ့။ တကယျလိုအပျတဲ့သူဆို ၆၀၀,၀၀၀ လောကျအထိ ပေးဝယျရတယျ။ အဲဒါအမြားကွီးမရဘူးလေ ဂါလံ ၅,၀၀၀၊ ၆,၀၀၀ ယူတဲ့သူတှတေောငျမှ ၅၀၀ လောကျပဲရတော့တာ။ အဲဒါတောငျ လေးငါးရကျလောကျ စောငျ့နရေတာ။ ခှဲတမျးရတဲ့ဆိုငျတှကြေ ဈေးသကျသာတယျလေ။ လကျလီအသေးလေးတှေ တျောတျောမြားမြားဆိုရငျ ပိတျတောငျပိတျထားရတယျ ပိတျကုနျပွီ။"
ရနျကုနျ၊ မန်တလေး၊ နပွေညျတျောက ဆီဆိုငျ ၃၂၄ ဆိုငျကို ခှဲတမျးနဲ့ရောငျးခပြေးမယျလို့ ဆီတငျသှငျးတဲ့ လုပျငနျးရှငျတှကေ မလေ၂၁. ရကျက ထုတျပွနျပါတယျ။ ဒီနေ့ မလေ ၂၆ ရကျမှာတော့ ဆီဆိုငျပေါငျး ၃၂၄ ဆိုငျမကဘဲ ဆိုငျအမြားအပွားကိုလညျး ခှဲတမျးနဲ့ရောငျးပေးနပွေီလို့ ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
ပွညျတှငျးမှာ ဆီလကျကနျြနညျးနတေဲ့အတှကျ အရောငျးခဏရပျထားဖို့ စကျသုံးဆီလုပျငနျးရှငျတှကေ မလေ ၁၉ ရကျ မနကျပိုငျးမှာ ကွညောခကျြထုတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျးမှာ ဓာတျဆီဈေး အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈပျေါခဲ့သလို တခြို့ဒသေတှမှော ဓာတျဆီဝယျမရလို့ အရောငျးပိတျခဲ့ရတာမြိုးတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခွအေနတှေကေို စိုးရိမျစရာမလိုကွောငျး ဆီတငျသှငျးတဲ့ လုပျငနျးကွီးတခုက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။ စင်ျကာပူက ဆီတငျသင်ျဘောသုံးစီးလညျး သီလဝါဆိပျကမျးကို မကွာခငျရောကျဖို့ရှိကွောငျး သူကပွောပါတယျ။
"ခှဲတမျးခတြာတော့ အရမျးမြားတယျ။ ရနျကုနျ၊ မန်တလေး၊ နပွေညျတျော အဲလို SME ဆိုငျတှလေေ။ အခုလညျး ဒီတပတျထဲမှာလညျး အမြားကွီးပေးဖို့ ရှိတယျဗြ။ အကနျ့ အသတျတှတေော့ ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပမေဲ့ (ဆီပနျ့) လိုငျစငျနံပါတျတော့ ရှိရမှာပေါ့နျော။ အခုလကျရှိက သုံးစီးဝငျမယျ။ ဇှနျလထဲမှာလညျး သင်ျဘောတှဝေငျလာဖို့ အမြားကွီးရှိတယျ။ အနညျးဆုံးတနျခြိနျကတော့ ၆၀,၀၀၀ အထကျမှာပဲရှိတယျ။ လကျရှိဆိုရငျ discharge လုပျနတော တိတိကကြပြွောမယျဆိုရငျ ၂စီး discharge လုပျနတေယျ၊ နောကျထပျ ၂စီးလညျး stand-by အနအေထားပေါ့နျော ဆကျပွီးခဖြို့ အဲလိုတော့ရှိတယျ။"
ရနေံထှကျပစ်စညျး ကွီးကွပျစဈဆေးရေး ဦးစီးဌာနကတော့ 92 တလီတာကို ၁,၈၄၄ ကပျြ၊ 95 တလီတာကို ၁,၉၄၉.၃၃ ကပျြ၊ ပရီမီယံဒီဇယျ တလီတာကို ၁,၉၆၆.၂၁ ကပျြဆိုပွီး ရညျညှနျးဈေးနှုနျးကို ဒီကွာသပတေးနမှေ့ာ ထုတျပွနျထားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျလီဈေးကှကျမှာတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးထဲမှာ ဓာတျဆီ 92 တလီတာကို ကပျြ ၂,၇၀၀ လောကျအထိတကျခဲ့ပွီး ဒီနမှေ့ာတော့ နရောဒသေအပျေါမူတညျပွီး 92 တလီတာကို ကပျြ ၂,၀၈၀ ကနေ ၂,၃၃၀ ကွားရှိပါတယျ။